Chii Chinotsigirwa Zvemukati? Ungaita Sei Kuti Ugadzirise Zvemukati Kurudziro Yekuvandudzwa Kwekudzvanya-Kuburikidza Nemitero? | Martech Zone
Imwe yedzakanakisa nzira yekusimudzira yedu saiti uye kuwedzera kwedu kusvika kwave kuri kuburikidza nekutsigira zvirimo. Takatanga kushandisa mumwe mutengesi asi pavakangoerekana vamhanyisa kusimudzira kwedu imwe $ 10k - uye ndokutinyorera isu kwazviri tikati tivabhadhare - takaidaidza kuti yapera. Takatamira ku Taboola uye takave nezvakanaka zviripo nemikana yekuparadzanisa vateereri vedu nenyika (pamwe neinodzvanya-kuburikidza nemitengo yemitengo).
Iko kune anopfuura mashanu mamirimita ezvimedu zvemukati izvozvi zvinokurudzirwa kuburikidza neyedu yemukati yekutsvaga chikuva, uye zviuru zvemabhurandi anomhanyisa zvemukati zvemisangano. Zvakanaka kutaura kuti isu takanyatsozviona zvese, uye tiri munzira takadzidza chinhu kana zviviri nezve izvo zvinoita kuti vanhu vadzvanye uye vazvibate papuratifomu yedu. Taboola
Chii Chinotsigirwa Zvemukati
Zvitoro zvakawanda zvinokanganisa kushambadzira kwazvino uye inotsigirwa zvemukati kushambadzira. Zvemukati zvinotsigirwa zvakatosiyana, kazhinji bha yezvinyorwa zviri pasi pechinyorwa chakaburitswa chine zvinyorwa zvinoenderana nemusoro wenyaya. Iyo inotsigirwa yemukati kambani, saTaboola, inoongorora zvakaburitswa zvemukati kuti ibudise wakanakisa mutambo mune mhedzisiro kuti uwane yakakwira yekudzvanya-kuburikidza chiyero. Ini ndinotenda iro simba rakakura kwazvo rezvakatsigirwa zvemukati kugona kwayo kuita kuti zvemukati zvionekwe.
Nzira yekuwedzera sei Kubaya-Kupfuura Rate pane Inotsigirwa Zvemukati
Taboola yaisa pamwechete iyi infographic kuti ikubatsire kukwidzirisa yako yakatsigirwa zvemukati - kubva munzira yekunyora yako zita rechiratidzo kune marudzi ezvigunwe kana mifananidzo yakatarwa yaunoburitsa. Kushandisa chiito verbiage icho chakanangidzirwa kune vateereri vako uye zvakapfuma, mifananidzo inooneka inotaridzika zvakanaka mune diki fomati yakakosha.
Tags: zvakatsigirwa zvemukatitaboola